जनताको भविष्यमाथि खेलबाड कहिलेसम्म ? | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
जनताको भविष्यमाथि खेलबाड कहिलेसम्म ?
२०७१ पुष १६, बुधबार ०३:३० गते
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताको भोट माग्नका लागि राजनीतिक दलहरुले संविधान दिनका निम्ति तोकेको अन्तिम समयसीमा माघ ८ आउन अब केही हप्तामात्र बाँकी छ । तर, दोस्रो संविधानसभाले पनि नयाँ संविधान जारी गर्ने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरुमा अघिल्लो संविधानसभामा देखिएका गलत प्रवृत्ति र संस्कारमा फेरि पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन । अब दोस्रो संविधानसभा असफल भयो भने फेरि तेस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुने कार्य असम्भवजस्तै देखिन्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो घाटा संविधानसभाको माग गर्दै हजारौँ जनताको रगत बगाउने राजनीतिक दललाई पर्ने छ । फेरि पनि जारी संक्रमणकालले निकास नपाए देश र जनताको भविष्य दशकौँ पछाडि धकेलिने निश्चित छ । अहिलेमात्र होइन, नेपालको राजनीति २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नै निकै अस्थिर रहँदै आएको छ । कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष राम्रोसँग शासन गर्न पाएको अभिलेख भेटिँदैन । सधैँ देश र जनताको भविष्यमाथि खेलबाड हुनुका कारणहरु यस प्रकार छन् ः–
१) राजनीति समाजसेवा नभई पेसा बन्न जानु ः
राजनीतिको शाब्दिक अर्थले नीतिहरुको पनि राजा भन्ने बुझाउँछ, तर नेपालमा अहिलेको युवापुस्ता राजनीतिको शब्दसम्म पनि सुन्न चाहँदैन । नेपालको राजनीति भन्ने बित्तिकै शक्ति र सत्ताको दुरूपयोग, भ्रष्टाचार र कुशासनको पर्यायवाची शब्दजस्तो बनेको छ । विद्यार्थी जीवनदेखि राजनीतिमा लागेका नेपालका राजनीतिक दलका अधिकांश शीर्षस्थ नेताहरुको अन्य कुनै काम गरेर खाने खुबी नभएकाले उनीहरु सधैँ सत्ता र पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वका लागि सत्ता तथा शक्तिको वरिपरि घुमिरहने प्रवृत्ति छ । देश र जनताको सेवा गर्ने राजनीतिको मूल आदर्श नेपाली राजनीतिबाट बिस्तारै ओझेल पर्दै गएको छ । अहिले सत्ता र शक्तिको बाँडफाँडको विषयले पनि संविधानसभा ओझेलमा पर्दै गएको छ । हिजोका पञ्चायतकालीन नेताहरुकै नेपाली राजनीतिमा बोलबाला भएकाले पनि नेपाली राजनीतिमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । उनीहरु राजनीतिलाई कहिल्यै सेवा निवृत्त नहुने पेसाका रुपमा लिने गर्दछन् । पटकपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न खोज्नु त नेपाली नेताहरुको मुख्य विशेषता नै हो ।
२) संकीर्ण सोच र अलोकतान्त्रिक चरित्र ः
नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुमा राष्ट्रिय नेता बन्ने खुबी कसैमा देखिँदैन । देशको राजनीतिले हिजोका सूर्यबहादुर थापादेखि आजका सुशील कोइराला, माधवकुमार नेपाल, केपी ओली, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईदेखि हरेक नेताहरुको परीक्षण गरिसकेको छ । सबै नेताका अनुहार फरकजस्तो देखिए पनि काम गर्ने शैली र संस्कार एकै देखिन्छ । राजनीतिक दलको सीमित घेरा र आसेपासेभन्दा बढी फराकिलो सोच कसैमा देखिँदैन । नत्र, उनीहरुको मुख्य एजेन्डा दलीयभन्दा पनि देश र जनताको भविष्य प्राथमिकतामा पर्ने गर्दथ्यो । देशको विकासका लागि न त संघीय संरचना नै आवश्यक पर्दछ, न त एकात्मक राज्य नै बाधक बन्दछ । सबैभन्दा ठूलो मुद्दा बनेको त कानुन र विधिको शासनको स्थापना नै गर्नु हो ।
३) लोकतन्त्रको नाममा छाडातन्त्र ः
हरेक स्वतन्त्रताभित्र नागरिकका कर्तव्य र दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ । कर्तव्य र जिम्मेवारीबिनाको स्वतन्त्रता छाडातन्त्रभन्दा बढी केही हुन
सक्दैन । संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै नेपालमा हरेक जात, जाति, धर्म र संस्कृतिका मानिसले आफ्नो हक तथा अधिकारको खोजी भने गरेका छन्, तर आफ्नो कर्तव्य भने बिर्सिएको देखिन्छ । जसले जे–जसरी पनि लोकतन्त्रका नाममा जे गरे पनि हुने छाडातन्त्रले गर्दा पनि नेपालको राजनीतिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । बन्द, हड्ताल, धम्क्याउने, थर्काउने कार्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा स्वतन्त्रताका नाममा छाडातन्त्र बढेको छ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि देशको विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा देशको विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुभित्र पनि अन्तरपार्टी नियन्त्रण तथा चेन अफ कमान्ड कमजोर देखिन्छ । शीर्षस्थ नेतृत्वको आदेश, निर्देशन नमान्ने संस्कारले राजनीतिक दलहरुभित्र पनि छाडातन्त्र बढेको छ ।
३) दलहरुमा रहेको बदलाको भावना ः
राजनीतिक दलहरुबीचमा रहेको आपसी द्वन्द्वले गर्दा पनि देशको विकासले गति लिन सकेको छैन । २०४६ सालपछि लगातार सत्तामा जाने होड र एक दलले अर्काे दललाई असफल बनाउने गलत नीतिका कारण जसरी हुन्छ प्रतिपक्षले सरकारलाई असफल बनाउने गलत संस्कार नेपालमा देखिन्छ । अहिले पनि हिजो सत्तामा रहँदा संविधान लेख्न नसकेको एमाओवादीलगायतका अन्य प्रतिपक्षी दलहरुले अहिलेका सत्तारुढ दललाई पनि त्यही हालतमा पु¥याउने कसरत गर्दैछन् । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा देशले राजनीतिक तथा संवैधानिक निकास पाउन सकेको
छैन । जतिसुकै सहमतिको नाटक गरे पनि दलहरुबीचमा रहेको बदलाको भावना र नकारात्मक तुषले गर्दा पनि देशको राजनीतिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । राम्रो काम गर्न खोजे पनि जस नदिने संस्कार नेपाली राजनीतिमा देखिन्छ । अरुलाई कमजोर देखाएर आफू बलियो देखिने गलत संस्कारले गर्दा पनि नेपाली राजनीति सधैँ संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ ।
४) न पढेर जान्नु, न त देखेर जान्नु ः
हरेक व्यक्तिले कि त पढेर अन्य विकसित देशका बारेमा जान्दछ, कि त देखेर जान्दछ । राजनीतिक दलका नेताहरु अन्य देशका प्रजातान्त्रिक विकास र निर्माणका बारेमा अपरिचित भने छैनन्, तर पनि विकसित देशको जस्तो राजनीतिक संस्कार बसाल्न भने सकेका छैनन् । भाषणमा त राजनीतिक दलका नेताहरु नेपाललाई सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड बनाउने भने पनि उनीहरुको कार्यशैली भने ती देशका नेताहरु जस्तो बन्न सकेको छैन । ती देशहरु विकसित बन्नुका आधारहरु के हुन् भनेर सामान्य अध्ययनसमेत गरेको पाइँदैन । आफ्नो व्यवहारमा, सोचमा रुपान्तरण नआएसम्म देशको विकास सम्भव छैन । सतही रुपमा बुझ्दा संविधान नबनेर देशले विकासको गति लिन नसकेको जस्तो देखिए पनि राजनीतिक दलको नेतृत्व तहको इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताकै कारण देशले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । नेपालभन्दा सबै विषयमा पछाडि परेका देशहरु विगत दुई दशकमा कहाँबाट कहाँ पुगिसके, तर नेपालको हालत भने जहाँको त्यहीँ रहेको छ । २०४६ सालपछि आजसम्म देशको राजनीति र प्रजातान्त्रिक संस्कारले गुणात्मक फड्को मार्न सकेको छैन । प्रजातन्त्रको ठाउँमा लोकतन्त्र र राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्रको कुरा गरे पनि काम र कार्यान्वयनको स्तरमा भने कुनै रुपान्तरण आउन सकेको छैन । देशमा दोस्रो जनआन्दोलन र संघीयता तथा समावेशीकरणको कुरा गरे पनि जनता खुसी बन्न नसकेसम्म वा जनताको जीवनस्तरमा रुपान्तरण नआएसम्म विकास र परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।
घुमीफिरी रूम्जाटार भनेजस्तै नेपालको राजनीतिक दलका उही पुरानो संस्कार र संस्कृतिको निरन्तरताले गर्दा नेपाली जनताको भविष्य अन्यौलग्रस्त बन्दै गएको छ । युवाहरु विदेशिएर देश नै रित्तिन लागिसक्यो, तर पनि नेताहरुमा नेता बन्नुको घमण्डले छाड्न सकेको छैन । अरबौँ खर्च गरिएको दोस्रो संविधानसभा पनि यही पुरानो गलत संस्कारले गर्दा फेरि पनि निकम्मा बन्दैछ । सधैँ गरिबी, अशिक्षा र अन्धविश्वासमा बाँच्न बाध्य नेपाली जनताको जीवनस्तरमा खासै ठूलो परिवर्तन आउन नसक्दा जनतामा आशाभन्दा पनि निराशा बढेको देखिन्छ । खराब राजनीति र गलत संस्कारको प्रतिफल पुस्तौँसम्म नेपाली जनताले पाउने छन्् । हिजो दरबार र पञ्चायती शासकले गरेको खेलबाडको प्रतिफल अहिले हामी भोग्दै छौँ भने अहिले गरिएको खेलबाड भोलिको पुस्ताले भोग्नेछन् । यसरी जनतामाथि गरिँदै आएको खेलबाडलाई खबरदारी नगरेसम्म देशमा संविधान लेखियोस् वा नलेखियोस् र संघीयतामा जाओस् वा नजाओस्, खासै मह¤वपूर्ण अर्थ राख्दैन । शब्दमा, भाषामा आउने रुपान्तरणभन्दा पनि अहिले नेपाली जनतालाई व्यवहारमा रुपान्तरण चाहिएको छ ।